Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Al Qaeda, i-Islamic State kwi-mission yokuBulala kwiNgingqi yase-Malian yase-Mopti
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseMali eziQhekezayo • iindaba • Safety • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Abantu abangama-31 abamsulwa kwibhasi kawonke-wonke eMopti, eMali bahlaselwe izolo.
Iilali zaseMopti kwiLizwe elikwiNtshona Afrika eMali zaziwa njengenye yezona ndawo zingaqhelekanga nezinemibala yelizwe. Ngoku yenye yezona ndawo zibulalayo eMali.
Mopti,” iVenice yaseMali,” likomkhulu lommandla wesihlanu. Esi siqithi sinelinye lawona mazibuko axakekileyo kuMlambo iNiger. Ngummandla ogqwesileyo kwezokhenketho.
Lo mmandla uyindawo enyibilikayo, eyilwe ziintlanga ezahlukahlukeneyo eziphila ngemvisiswano. Iilwimi eziqhelekileyo zale ndawo ziquka isiFulani, isiBambara, isiDogon, isiSonghai, nesiBozo.
Ukhenketho lwalukhe lwaba lishishini elikhulayo kunye ne-Air Mali ibhabha isiya e-Mupti isuka e-Timbuktu nase-Bamako, kunye neebhasi zokutyelela ezithatha indlela enemibala esuka e-Mupti ukuya kwisixeko esikhulu sase-Bamako.
Lo mmandla ngoku ungoyena ndoqo wobundlobongela eMali obuphenjelelwa ngabavukeli abanxulunyaniswa ne-al Qaeda kunye ne-Islamic State.
Izolo, amajoni abulala ubuncinci abantu abangama-31 kumbindi weMali ngoLwesihlanu xa badubula ibhasi eyayisa abantu kwimarike yendawo, abasemagunyeni balapha bathi - uhlaselo lwamva nje olubulalayo kwindawo ngoku eyaziwa kwaye elawulwa luvukelo lobundlobongela. Ibhasi yahlaselwa ngabadubuli abangaziwayo njengoko yayihamba indlela yayo kabini ngeveki ukusuka kwidolophana yaseSongho ukuya kwimarike eBandiagara, iikhilomitha ezili-10 (iikhilomitha ezi-6) kude. Amadoda axhobileyo adubula kwinqwelo-mafutha, anqumla amatayara, aza adubula abantu.
I-Mali yeyona ndawo inikwe indawo yeLifa leMveli yeHlabathi e-Afrika. I-mosques i-Djingary Ber kunye ne-Sankore e-Timbuktu, i-mosque yase-Djenne, i-Dogon Country, i-Tomb yase-Askia e-Gao, kunye ne-Jaaral kunye ne-Degal e-Diafarabe kunye ne-Dialloube zonke zaqatshelwa luluntu lwamazwe ngamazwe ngokubandakanywa kwiLifa leMveli le-UNESCO.
Ezi ndawo zihloniphekileyo zenkcubeko zongezwa kwimihlaba emihle, ubumelwane obudlamkileyo kunye nemibalabala kunye needolophana, kunye ne-Niger Delta esembindini kunye nezakhiwo zayo zodongwe kunye neendawo zayo zeRamsar ezihlala nyaka ngamnye amawaka eentaka zamanzi, intlango yeSahara ebuhle bayo, kwezinye iindawo, imincili. iyakhula njengoko utyhutyha ilizwe.
Ngokwendawo yayo, imbali, kunye nenkcubeko, iMali yayilukhenketho kunye nelizwe elijolise kubugcisa.
I-Mali inemvelaphi etyebileyo yenkcubeko kwaye ilizwe libhiyozela iminyhadala eyahlukeneyo unyaka wonke kwimimandla eyahlukeneyo: iminyhadala yenkcubeko, iminyhadala yomculo, iminyhadala yezenkolo, apho iiforamu zengxoxo zaye zahlelwa ngokuthatha inxaxheba kwabantu basemzini abavela kuwo onke amazwekazi.
Uzakuzo wase-US uyalumkisa: Sukuhamba uye eMali ngenxa yolwaphulo-mthetho, ubugrogrisi kunye nokuxhwila.
U-Ned Price, isithethi seSebe laseMelika uthe: I-United States igxeka kakhulu ukuhlaselwa kwabemi ngoMgqibelo kufuphi ne-Bandiagara, eMali, eshiye i-31 ifile kunye ne-17 yenzakele. Sidlulisa uvelwano lwethu olunzulu kubemi baseMaliya kwaye siza kuqhubeka sisebenzisana nabo ekusukeleni ikamva elikhuselekileyo, elinempumelelo nedemokhrasi.